.NET ASP.NET C# Database Flash HTML & CSS Illustrator Java Objective C Photoshop PHP PHP Framework Python Wordpress Archives
Product Review Windows 8 Consumer Preview	Windows 8 Consumer Preview
IT-KOKOMarch 1, 2012Product Review
Windows 8 Consumer Preview ကို မနေ့တုန်းက တင်ကြည့်လိုက်တာပါ။ Developer Preview တုန်းကတော့ Virtual Window အနေနဲ့ဘဲ တင်ပြီးသုံးကြည့်တာပါ။ အခုဟာကတော့ Stable Version နဲ့တော်တော်လေး တူတာကြောင့် Boot လုပ်ပြီး တင်လိုက်တယ်။ ၁ နာရီလောက် ကြာသွားတယ်။ တင်ပြီးတော့ စစချင်းမှာဘဲ Logo လေးတတ်လာတယ်။ Boot Logo လို့ခေါ်မယ်ထင်တယ်။ Windows7ကဟာလေးကို ပိုကြိုက်တယ်။ Windows 8 က logo က တိုက်ငါး ပုံလေးနဲ့ 8 လေးတွေပေါင်းထားတာ တမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်။ ဖြစ်သင့်တာက အခု windows 8 logo ပုံလေးပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ Boot Windows တွေကို ရွေးရတဲ့ နေရာမှာတော့ တော်တော်လေးမိုက်တယ်။ အရင်တုန်းကလို Black and White စာသားတွေမဟုတ်တော့ဘူး။ အပြာရောင်နောက်ခံလေးမှာ Metro Style စာနဲ့ logo လုပ်ထားတယ်။ Windows7ကိုတော့7ဆိုပြီးလုပ်ထားတယ်။ တော်တော်လေးမိုက်တယ်။ ပြီတော့ Personalize လုပ်ခိုင်းတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Windows Phone မှာ လိုဘဲ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အရောင်ရွေးလို့ရတယ်။ ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုလိုတာက Hotmail Account လိုတယ်။ Hotmail ရှိမှ သုံးလို့ရမယ်ထင်တယ်။ Hotmail အကောင့်နဲ့ Sync လုပ်ဖို့ပါ။ ပြီးရင်တော့ စပြီးသုံးလို့ရပါပြီ။ Windows Phone အတိုင်းဘဲ အကွက်လေးတွေနဲ့ စပေါ်လာတယ်။ သုံးလို့ကောင်းတယ်။ Metro UI ကတော့ သူများနဲ့မတူဘူး ထူခြားတယ်။ Computer ကို windows phone ကအတိုင်းသုံးလို့ရတယ်။ Store, IE, Mail, Photo, Camera, People, Music, etc စတဲ့ Windows Mobile က features တွေကို သုံးလို့ရသလို အရင်တုန်းက Desktop ကိုလည်း သုံးလို့ရပါသေးတယ်။ Mail ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်။ Outlook, Gmail အကုန်သုံးလို့ရတယ်။ Calendar ကတော်တော်အသုံးဝင်မယ်။ Meetings, Birthday, Appointment တွေကို ပါပြတယ်။ နောက်တစ်ခုက Photo All in one ဖြစ်သွားတယ်။ Facebook, Flickr, etc မှာရှိတဲ့ ပုံတွေကိုပါ ကြည့်လို့ရတယ်။ ကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ မြန်တယ်။ လှတယ်။ Quality ကောင်းတယ်။ Messaging ကတော့ Chatting လုပ်လို့ရတယ်။ MSN ကလူတွေနဲ့။ တခြား အကောင့်တွေနဲ့ လည်း ရမယ်ထင်တယ်။ Contact ကိုလည်း Sync လုပ်ထားတယ်။ Game ကတော့ Xbox Console နဲ့ တွဲပြီး ဆော့လို့ရတယ်။ ဖုန်းမှာရသလိုု Computer မှာရတော့ သီခြား Apps တွေ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဉပမာ Calendar ဆို ကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်တယ်။
နောက်တစ်ခုကောင်းတာတစ်ခုက မြန်မာ ယူနီကုဒ်ပါ။ Windows 8 မှာ ဘာဖောင့်မှ သွင်းစရာမလိုဘဲ မြန်မာစာတွေကို မြင်ရပါပြီ။ Microsoft ကသွင်းပေးထားတာပါ။ Facebook, Gmail, etc တွေမှာ မြန်မာယူနီကုဒ်နဲ့ ဆိုအားလုံးမြင်ပါတယ်။ အဲ့တော့ Zawgyi ဖောင့်တွေက ဖတ်မရတဲ့ မြန်မာစာတွေ ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ကျွန်​တော်သိရသလောက် Myanmar Text Font မှာ မြန်မာစာအပြင် တိုင်းရင်းသား စာလုံးတွေပါ ထည့်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရှမ်း၊ မွန် Character တွေပါလာလို့ပါ။ ပြောရရင်တော့ မထူဆန်းပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တုန်က ကျွန်တော် မြန်မာယူနီကို စပြောင်းတုန်းက ပိုစ့်တစ်ခုတင်ဖူးတယ် Windows မှာ ယူနီကုဒ်ပါလာရင် ကျွန်တော် Zawgyi ကို စက်ထဲက ထုတ်ပစ်မယ်လို့။ အခု အဲ့လိုလုပ်ရမယ့် အချိန်ရောက်ပါပြီ။ zawgyi တကယ်မလိုတော့ပါဘူး။ ဖုန်းတွေမှာလဲ ရလာပါပြီ။ နောက်ပိုင်းထွက်မယ့် Android မှာပါရလာတော့မှာပါ။ Mac, Windows, Ubuntu အကုန်ရနေပြီလေ။ ဖောင့်ဘဲပါလာတာကိုဘဲ သတိထားမိပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ လောလောဆယ် မစမ်းရသေးပါဘူး။ Apple လိုတော့ ပါလောက်မယ်မထင်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်ရှာကြည့်တာ ဖောင့်တစ်ခုဘဲပါတယ်။ သေချာပါတယ် ယူနီကုဒ်ပါ။ Keyboard ကတော့ မပါဘူး။ ကျွန်တော် Keymagic နဲ့ဘဲ အခုရိုက်နေတာပါ။ စာရိုက်တာနည်းနည်း မတူတာလေးတွေတော့ ဖြစ်နေတယ်။ ဉပမာ (မှာလိုက်)တာကို ရိုက်ရင်ုက ှနဲ့သွားကပ်ပြီး မှု ဖြစ်သွားတယ်။ ရိုက် မှာဆိုရင်လဲုက အရှည်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ အတိုဖြစ်ရမှာ။ ကျွန်တော် တွေ့သလောက်ဘဲရှိပါသေးတယ်။ Font ကို ပြန်ပြင်ပေးပြီး သူတို့ကို ပို့ပေးလို့ရတယ်ထင်တယ်။ အခုအမြန်တင်လိုက်တာကြောင့် သေသေချာချာ ပြန်မစစ်နိုင်လို့၊ နောက်မှဘဲ သေသေချာစမ်းပြီးမှဘဲ နောက်တစ်ပိုစ့်တင်ဦးမယ်။
Share this: Pin It	Comments Closed
Kaung Htet Zaw says:	March 1, 2012 at 3:15 PM	It’s called “Windows”, if I am not mistaken. Nice review, though!
Sezin Lynn says:	March 1, 2012 at 5:19 PM	Myanmar Keyboard ပါပါတယ်….
Go to control panel–>language—> addalanguage
then search Myanmar, but KB layout is not same with Zawgyi KB
bee says:	March 10, 2012 at 2:26 AM	shortcut ေတြ သိသေလာက္ မစပါဦးေနာ္
shut down ခ်ဖို႔ေတာင္ မနဲလိုက္ရွာေနရလို႔ပါ
IT-KOKO says:	March 11, 2012 at 10:52 AM	Win + Spacebar : Switch the input language and keyboard layout
bee says:	March 13, 2012 at 8:48 PM	Thankalot.
j3rryfate says:	July 14, 2012 at 3:50 PM	http://howto.cnet.com/8301-11310_39-57392988-285/how-to-create-a-shutdown-and-reboot-tile-in-windows-8/
Clicker says:	September 27, 2012 at 8:03 PM	အစ်ကိုရေ… ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်သိချင်လို့…
ကျွန်တော်က Linux ကို ဝင်းဒိုးနဲ့တွဲသုံးနေတဲ့သူပါ… အခု Windows 8 ထွက်လာပြီဆိုတော့ သူ့ကိုလည်း အရင်လို Linux နဲ့တွဲပြီး Dual boot တင်လို့ရပါသလားခင်ဗျာ။
ႏိုင္သူရ says:	October 6, 2012 at 9:27 PM	ျမန္မာစာေတြက ပို႔စ္တိုင္းအဆင္မေျပတာလဲ မဟုတ္ဘူးဗ် ဒါေပမယ့္ ဒီပို႔မွာေတာ့ ျမန္မာစာဖက္လို႔မရဘူးဗ်ဳိ႕
ပျော်ပျော်နေတယ်။ စာရေးတယ်၊ စာဖတ်တယ်၊ game ကစားတယ်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်တာ ကတော့ မလုပ်မနေရ ဝါသနာ။ နည်းပညာပိုင်းကတော့ အကြိုက်ဆုံး အရာ။
သိသလောက် မှတ်သလောက်လေးတွေနဲ့ စာရေးနေပါတယ်။ Republic Polytechnic(Singapore) မှာ Business Information Systems ကိုသင်ယူနေသူ။ Please like my Facebook Page | Add me in your Google+ Circles
Latest Posts by IT-KOKO
What’s Your Problem? (PBL)
[Updated] FrozenKeyboard for Android (Zawgyi Layout) MyanDroid Soft Keyboard (Zawgyi) Beta Myandroid Dictionary (Eng-Myan-Eng) Beta Myanmar Text to Speech App (MTTS) Shweyoe Dictionary Version 2.0 လမ္းခြဲၾကမယ္ဆိုရင္ အားလုံး တုိးတက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာက္က်မက်န္ခဲ့ေစဖုိ႔ How to makeablogger website Ads
Copyright © MyanmarTutorials 2012